China, Yakagadziriswa, Ballet Zvipfeko, Nyanzvi Yakagadziriswa Tutu, Ballet Tutu, Ballet Skirts, Dance Leotard, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Fitdance ballet fekitori - 3
Nei tutus iri kupfupika? TUTU zvinoreva 'gadheni revakadzi rakavanzika'?
Ballet inounza mundangariro nhevedzano yezviitiko zvinoyevedza. Vanenge vese vasikana vane ballet yakaoma mumoyo yavo, kunyangwe kana vasingakwanise kutamba ballet, panogara paine nzvimbo mumoyo mavo nezvese nezve ballet. Semuenzaniso: tutu.
Vana vanodzidza rumwe ruzivo rwakakosha uye matanho ekudzivirira kutamba
Vabereki vazhinji vanodavira kuti kudzidza kutamba kunogona kuvandudza hunhu hwavo, izvo ichokwadi, asi chokwadi chekudzidza kutamba chingaunzawo kukuvadza kukuru kuvana vavo Nekuti vashoma vanhu vanoona kuti kudzidza kutamba nekukurumidza, kazhinji, kana kwete nenzira kwayo kunogona kukuvadza mumuv......
Zvakanakira uye kufunga kubva kuvasikana vanotamba kuchikoro chepuraimari
Vabereki vazhinji vanokumbira vana vavo kuti vadzidze ballet, saka inguvai yakanaka yekutanga? Ndeapi matambudziko ekuteerera? Heino tarisiro yeFitdance Ballet Factory
Iwe unoda here kubvunza iyi minomwe mibvunzo nezve ballet kudzidza?
Ballet, yeEuropean echinyakare dhanzi, akave nemimba munguva yeItaly Renaissance Muhafu yepiri yezana ramakore rechi17, yakatanga kukura uye kuva inozivikanwa muFrance uye zvishoma nezvishoma yakava nyanzvi. Yakave yakakurumbira pasirese panguva yekuenderera kwekuvandudza. Chimwe chezvinhu zvakakosh......
Kuongorora - kweakakosha - ballet - yepanyama kudzidza
Ballet ine chivimbo, yakanangana, uye inoyevedza hunhu hwehunhu.Iyo nhevedzano yekufamba kwekutanga kweyemuviri ballet yakavakirwa pane pfungwa yerunako.